Ku saabsan CHPW - bogga rasmiga ah ee CHPW barta internetka rasmiga ah ee CHPW | Awooda bulshada Barta rasmiga ah ee CHPW
Ku dhowaad 30 sano, Community Health Plan ee Washington (CHPW) waxay siineysay qoysaska Washington daryeel caafimaad oo tayo leh waxayna taageereysay xulashooyinkaaga daryeelka caafimaadka.
Adiga ayaa khabiir ku ah caafimaadkaaga iyo ladnaantaada. Hadafkeenu waa inaan kaa taageerno sameynta go'aamada daryeelka caafimaad ee ugu fiican adiga iyo qoyskaaga.
Waxaa ka go'an hogaaminta wadada
Waxaan nahay qorshihii ugu horreeyay ee aan faa'iido-doon ahayn ee Washington lagu maareeyo oo ay maamusho Xarumaha Caafimaadka Bulshada ee gobolka.
Sanadkii 1992, bulshada Washington iyo xarumaha caafimaadka soogalootiga (CHCs), waxay abuureen Qorshaha Caafimaadka Bulshada ee Washington si loo siiyo caymis caafimaad dadka aan u adeegin shirkadaha caymiska dhaqameed.
Waxaan na xukumaa ururada bulshada (Xarumaha Caafimaadka Bulshada) kuwaas oo, markaa, ay xukumaan xubnaha bulshada.
Maaddaama aan nahay shirkad aan macaash doon ahayn, shaqadayada waxaa dhiirrigeliya marka hore danaha ugu wanaagsan ee xubnahayaga, bixiyeyaasha iyo bulshada. Waxaan dhiirrigelinnaa daryeelka la maareeyay sida habka loo xakameeyo kharashyada. Marnaba uma hurayo tayada daryeelka xubnaheenna.
Waxaan gacan-qabsi kula shaqeynaa ilaha bulshada ee maxalliga ah iyo ururada adeegga bulshada si aan u taageerno dhammaan dhinacyada nolosha xubnaheenna. Anaga ahaan, daryeelka caafimaad waxaa ka mid ah taageerada anshaxa, maskaxda iyo bulshada, iyo sidoo kale baahida caafimaad ee xubnahayaga.
Waxaan bixinnaa ikhtiyaarro qorshe caafimaad oo kala duwan si loo hubiyo in reer Washington ay helaan daryeel caafimaad.
Ka go'an qoysaska Washington
Waxaan kula dhaqmeynaa sida aan rabno in naloola dhaqmo.
Waxaan ku dadaalnaa inaan CHPW guri uga dhigno dhammaan xubnaheenna. Hoyga macnihiisu waa waxyaalo kala duwan dad kala duwan, laakiin wuxuu ku bilaabmaa in la fahmo, la ixtiraamo, lana daryeelo.
Isku xirka baahiyaha daryeelka caafimaad ee qoyskaaga waxay dareemi kartaa shaqo waqti-buuxa ah. Laakiin waxaan ku jirnaa kooxdaada, waxaan kaa caawinaynaa inaad hesho dhammaan adeegyada, daaweynta iyo xalka aad ugu baahan tahay caafimaadkaaga oo dhan. Luqad kastoo aad ku hadasho, waxaan bixinaa adeegyo turjumaad.
Waxaan siinaa helitaanka adeegyo caafimaad oo tayo sare leh qof walba, iyadoon loo eegin awoodda wax lagu bixiyo.
Wadajir ahaan, oo leh qoyska Xarumaha Caafimaadka Bulshada, waxaan xubnaha ku xoojineynaa adeegyo kabaxsan daryeelka caafimaad ee soo jireenka ah (sida cuntada, guryaha, iyo gargaarka gaadiidka).
Ka go'an bulshada Washington
Waxaan halkaan ujoognaa dadka degan Washington, maxaa yeelay waxaan nahay reer Washington.
Waxaad nagu arki doontaa agagaarka Washington xafladaha bulshadaada, baska, ama xitaa kulanka PTA. Shaqaalaheena CHPW waa deriskaaga halkan Washington.
Hawlgalladayada shaqaaluhu horkacaan waxay iskaashi la yeeshaan hay'adaha samafalka ee maxalliga ah si aan u abaabulno darawallo saddexdii biloodba mar ah ururinta cuntada, musqulaha, dharka, buugaagta, hadiyadaha fasaxa, iyo agabka dugsiga.
Shaqaalaha CHPW waxay had iyo jeer ka baxaan xafiiska si ay u isticmaalaan 40 saacadood sanadkii mushahar iskiis ah oo mushahar qaata, iyagoo u adeegaya cuntada bangiyada cuntada iyo nadiifinta meelaha bulshada.
Ka go'an caafimaadka Washington
Waxaan ku xirnahay Washington oo dhan.
Our shabakadda gobolka oo dhan waxaa ka mid ah:
20 Xarumaha Caafimaadka Bulshada hawlgalka 139 rugaha caafimaadka gobolka oo dhan
In ka badan 2,700 bixiyeyaasha daryeelka aasaasiga ah
In ka badan 14,900 oo khabiiro caafimaad ah
In ka badan 7,500 oo ku takhasusay caafimaadka dhaqanka
In ka badan 100 cisbitaalo
Ka go'an mustaqbalka Washington
Waxaan maanta u hawlgalnaa sidii aan u horumarin lahayn caafimaadka Washington sannadaha soo socda.
Iyada oo loo marayo laantayada siyaasadeed, Shabakadda Caafimaadka Bulshada ee Washington (CHNW), waxaan kula dagaallameynaa sharci dejinta gobolka iyo federaalka si loo ilaaliyo daryeelka caafimaadka ee Washington loona ballaariyo caymiska.
Sababtoo ah waxaan u heellan nahay caafimaadkaaga, waxaan u hoggaaminnaa qaybta caafimaadka maskaxda iyo daryeelka qof walba.
100% faa iidooyinkayagu waxay dib ugulaabtaan xarumaha aan wada shaqeynta leenahay Xarumaha Caafimaadka Bulshada, si markaa ay daryeel fiican ugu fidiyaan dhamaan.
Qorshaha Caafimaadka Bulshada ee Washington, waxaan aaminsanahay awoodda bulshada. Markii aan wada istaagno, waxaan istaagnaa mid xoogan, midaysan soo dhaweynta, taageerida, iyo dhiiri galinta xubnaha ku socda wadadooda caafimaadka ugu fiican.